94% yevashandisi vane iPhone muUnited States havashandise Apple Pay | IPhone nhau
94% yevashandisi vane iPhone muUnited States havashandise Apple Pay
Ignatius Room | | Apple Pay, Apple zvigadzirwa
Apple Pay yakatangwa pamusika, pakutanga muUnited States mu2014 uye zvishoma nezvishoma zvaenda kuwedzera kune dzimwe nyika. Iyo parizvino inowanikwa mune dzinosvika nyika dzese dzeEurope, zvisinei, zvinoita sekunge Latin America iri kuramba iri nzvimbo iyo yeApple isingamiriri pekutanga kuvhurira nzvimbo yayo yekubhadhara.
Nzvimbo yekubhadhara iyo muUnited States ine yakaderera kwazvo kushandiswa kunyangwe yanga iri mumusika kwemakore manomwe. Zvirinani maererano nedata kubva kuongororo yakaitwa nevakomana kubva kuPYMNTS. Maererano neshumo iyi, 94% yevashandisi vane Apple Pay yakagadzirirwa pa iPhone yavo havashandise mune zvakajairwa kutenga.
Mune iyo PYMNTS mushumo isu tinogona kuverenga:
Makore manomwe mushure mekumisikidzwa, data nyowani kubva kuPYMNTS inoratidza kuti 93,9% yevatengi vane Apple Pay inogoneswa paPhones avo havashandise muzvitoro kubhadhara zvavanotenga. Izvi zvinoreva kuti chete 6,1% vanoita.
Iyo kambani yawana iyi data kubva kune Ongororo yevatengi 3.671 vekuUS yakaitwa Nyamavhuvhu 3-7, 2021. Muna 2015, kushandiswa kweApple Pay, apo chikuva chaive chiri mumusika kwegore, chaive 5.1%, zvakangofanana zvakafanana ne2019.
Zvinoenderana neichi chidzidzo chimwe chete, chete 43,5% yevashandisi vane Apple Bhadharira michina inoenderana uye 70% yevatengesi vanobvuma iyi nzira yekubhadhara, saka harisi dambudziko rekuwedzera uye kugamuchirwa nevatengesi, asi kushomeka kwechido. Hadzisi dzese nhau dzakaipa. PYMNTS inosimbisa iyo yevashandisi vanobhadhara digitally, 45,5% vanoshandisa Apple Pay, chinzvimbo pamusoro pePayPal, Google Pay uye Samsung Pay.
Nekuda kwekushomeka kwevashandisi veUS mune iyi nzira yekubhadhara, Apple iri kudzidza kuvhurwa Apple Bhadhara Gare gare, sevhisi inobvumidza vatengi kubhadhara kutenga kana masevhisi muzvikamu, sevhisi yatange tichitaura nezvayo kwemwedzi yakati wandei asi iyo parizvino inoita kunge yakamiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » 94% yevashandisi vane iPhone muUnited States havashandise Apple Pay
Yakasimbiswa musi wechiitiko, iyo iPad inotanga kushomeka "zvinoshamisa"
Podcast 13x03: Apple Chiitiko munaGunyana 14